Nimbus Coin စျေး - အွန်လိုင်း NMB ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Nimbus Coin (NMB)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Nimbus Coin (NMB) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Nimbus Coin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Nimbus Coin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Nimbus Coin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
Nimbus CoinNMB သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.286Nimbus CoinNMB သို့ ယူရိုEUR€0.241Nimbus CoinNMB သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.218Nimbus CoinNMB သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.259Nimbus CoinNMB သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr2.56Nimbus CoinNMB သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.1.79Nimbus CoinNMB သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč6.28Nimbus CoinNMB သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł1.06Nimbus CoinNMB သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.379Nimbus CoinNMB သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.397Nimbus CoinNMB သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$6.39Nimbus CoinNMB သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$2.21Nimbus CoinNMB သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$1.51Nimbus CoinNMB သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹21.4Nimbus CoinNMB သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.48.05Nimbus CoinNMB သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.391Nimbus CoinNMB သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.43Nimbus CoinNMB သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿8.87Nimbus CoinNMB သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥1.98Nimbus CoinNMB သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥30.17Nimbus CoinNMB သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩338.88Nimbus CoinNMB သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦110.4Nimbus CoinNMB သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽20.8Nimbus CoinNMB သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴7.9
Nimbus CoinNMB သို့ BitcoinBTC0.00002 Nimbus CoinNMB သို့ EthereumETH0.000715 Nimbus CoinNMB သို့ LitecoinLTC0.00486 Nimbus CoinNMB သို့ DigitalCashDASH0.0031 Nimbus CoinNMB သို့ MoneroXMR0.00317 Nimbus CoinNMB သို့ NxtNXT22.68 Nimbus CoinNMB သို့ Ethereum ClassicETC0.0396 Nimbus CoinNMB သို့ DogecoinDOGE79.03 Nimbus CoinNMB သို့ ZCashZEC0.00297 Nimbus CoinNMB သို့ BitsharesBTS10.89 Nimbus CoinNMB သို့ DigiByteDGB10.97 Nimbus CoinNMB သို့ RippleXRP0.946 Nimbus CoinNMB သို့ BitcoinDarkBTCD0.00975 Nimbus CoinNMB သို့ PeerCoinPPC0.953 Nimbus CoinNMB သို့ CraigsCoinCRAIG128.95 Nimbus CoinNMB သို့ BitstakeXBS12.07 Nimbus CoinNMB သို့ PayCoinXPY4.94 Nimbus CoinNMB သို့ ProsperCoinPRC35.51 Nimbus CoinNMB သို့ YbCoinYBC0.000152 Nimbus CoinNMB သို့ DarkKushDANK90.74 Nimbus CoinNMB သို့ GiveCoinGIVE612.49 Nimbus CoinNMB သို့ KoboCoinKOBO62.1 Nimbus CoinNMB သို့ DarkTokenDT0.263 Nimbus CoinNMB သို့ CETUS CoinCETI816.68
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Wed, 05 Aug 2020 23:10:02 +0000.